भुपेन्द्र मोडलिङ सगै छायांकन र निर्देशनमा ब्यस्त – Namaste Filmy
भुपेन्द्र मोडलिङ सगै छायांकन र निर्देशनमा ब्यस्त
छायांकन र निर्देशन ब्यस्त रहेका कलाकार भुपेन्द्र तुम्बाहाम्फे अहीले एकाएक चर्चामा छन् । उनले अभिनय गरेको म्यूजिक भिडीयो ”मनकारीको मनै जिती” बोलको गित सर्बाधिक लोकप्रिय बनेपछी उनी चर्चामा आएका हुन । हाल उनी मोडलिङ सगै छायांकन र निर्देशनमा पनी ब्यस्त छन । गत महिना मा मात्र उनले १८ वटा गितको छायांकन गरेका छन । एक महिना मा १८ गितको छायांकन एकै ब्यक्तिले गर्नु नेपाली चलचित्र जगतमा नैे उच्च रहेको उनी दाबि गर्छन । मोरङ टाँडी १ तिल्केनी मा जन्मीएका उनी २३ बर्षे बसन्त पार गरीकिेका छन । दमक बाट सञ्चालित हीमसिखर टेलिभिजनमा कार्यरत तुम्बाहाम्फे संगको जम्काभेट ।
–हाल के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले म धारावाहीक सिरीयल ”उफ यो संसार” को छायांङकन अनी दशै पछि बाट छायंङकन हुने विग ब्यानरको सिनेमा ”जदउ” मा मेन रोलमा अनुबन्धीत भएको छु त्यसको तयारी मा ब्यस्त छु र केही म्यूजिक भिडीयो को छायंङकन र निर्देशन पनी गरीरहेको छु ।
–तपाई मोडलिङ गर्नूहुन्छ छायांङकन र निर्देशन पनी उतिकै मात्रामा गर्नुहुन्छ तपाइलाई कसरी चिन्ने ?
सर्वप्रथम त मलाई छायांङकन को नाम ले नै चिन्नुहोस त्यसपछि निर्देशन अनी मात्र मोडलिङ ।
–मोडलिङ लाइ अन्त्यमा राख्नुभयो अफर नआएर हो ?
त्यस्तो होईन अफर त प्रसस्तै आउछ तर म छायांङकन र निर्देशन लाई फस्ट मान्यता दिन्छु । यसो भन्दैमा मोडलिङ लाई छोडी हाल्ने भन्ने हुदैन राम्रो प्रोजेक्टबाट अफर आएमा काम गरीन्छ ।
–अहिले सम्ममा कतिबटज गितमा मोडलिङ गर्नुभयो ?
११ वटा गरे प्राय मैले मोडलिङ गरेको गितहरु मोफसलमा हिट नै छन् त्यो त तपाई लाई पनी थाहा भएको कुरा हो ।
–अनी छायांङकन र निर्देशन ?
२५ गितको निर्देशन गरेको छु, छायांङकन चाही अहिले सम्ममा १६० बटा गितको गरीसके।
–मोडलिङ, निर्देशन र छायांङकन मध्ये काम गर्न सजिलो र रमाईलो कुन विधामा हुन्छ ?
काम गर्न त जुन सुकै काम पनी गाह्रो नै हुन्छ तर कलाकारीता क्षेत्र गाह्रो भएपनी रमालो क्षेत्र हो । निर्देशन गाह्रो काम हो यसको लागी गीत संगित प्रबिधि अभिनय लगायत सम्पुर्ण कुराको जनकारी हुनुपछर्, त्यस्तै छायांकन पनी प्रविधी सम्वन्धी सम्पुण कुराको जाकारी हुनुपर्छ र मोडलिङ मा पनि अभिनय र गित संगित सम्बन्धी सम्पुण जानकारी हुनुपर्छ । यसमा सबैभन्दा गाह्रो र रमाइलो मोडलिङ नै हो ।
–तपाई ले त मोफसल देखी राष्टिय स्तर सम्मका कलाकार हरु संग काम गरी सक्नुभएको छ, के फरक हुन्छ स्थानीय स्तरका कलाकारहरु संग र राष्टिय स्तरका कलाकार हरु संग काम गर्दा ?
ठुला कलाकार र नव उदयमान कालाकारहरु मा फरक त हुनेनै भयो ठुला कलाकार हरु संग काम गर्न रमाईलो हुन्छ उनीहरुले निद्र्रेशकको सोच अनुसारको काम गर्न सक्छन् तर स्थानीय स्तरका कलाकार हरु संग एक्सपिरीयन्स कम हुन्छ उनीहरुले एउटै सुट लाई धेरैबेर लगाइदिन्छन् त्यसले गर्दा काम गर्न झन्झटीलो र बोरीङ फिल हुन्छ ।
–तपाईलाई मनपर्ने नेपाली सेलिबे्रटीको नाम भन्नु पर्दा ?
आर्यन सिक्देल र नम्रता श्रेष्ठ
प्रसंङ्ग बदलै, –बिवाह गर्नुभयो ?
–विहे गर्ने उमेर भएन र ? कहीले गने ?
उमेर त भएकै हो तर मन मिल्ने साथि भेटेकै छैन ।
–लभ परेको छैन ?
पहिले चाही एउटा केटी संग हल्का रीलेशनसिप चलेको थियो अहिले छैन करिव १ बर्प अगाडी नै ब्रकअप भयो ।
–गर्लपे्रmण्ड लाई माया गर्न जान्नु भएन की ?
भैतिक रुपमा त माया गर्न नजानेको थिए, सारिरीक रुपमा चाही नजानेर हुनसक्छ ।
–तपाईको बुझाईमा माया के हो ?
मायाको बारेमा आ–आफ्नो परीभाषा हुन्छ मेरो विचारमा एक मुटु बाट अको मुटु सम्मको कनेक्सन हो ।
–अनी सेक्स ?
यसलाई त कसरी परीभाषीत गर्ने र ? स्वर्गीय आनन्द हो भन्छु ।
–यो स्वर्गीय आनन्दको अनुभब त लिसक्नुभयो होलानी ?
हा हा हा यसलाई चाही गोप्य नै राखै होला ।
–अन्त्यमा, आगामी दीनमा के गर्ने योजना छ ?
खास त्यस्तो योजना त छैन यहीे मोडलिङ क्षेत्रमा नै जम्ने सोच छ, निर्देशन र छायांङकन लाई अली बढी प्राथमीकता दिन्छु ।
श्रीकृष्णको ४५ दिनको तिथिमा स्वेताले के लेखिन ?
ह्याकरले सेक्स गरेको तस्वीर लीक गरिदिएपछि ।